10/10/2021 - ALANZAYAR
PDF တှကေ ယောကျြားတှဆေိုရငျ ခြောငျးမပဈနဲ့၊ ထိပျတိုကျ တိုကျရဲလားဟုဆို
PDF တှကေ ယောကျြားတှဆေိုရငျ ခြောငျးမပဈနဲ့၊ ထိပျတိုကျ တိုကျရဲလားဟုဆို တပျမတျောသတငျးပွနျကွားရေးဒု ဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက PDF တှကေ ယောကျြားတှဆေိုရငျ ခြောငျးမပဈနဲ့၊ ထိပျတိုကျ တိုကျပှဲ တိုကျရဲလားဟုဆို ယနေ့ နပွေညျတျော ဗှီဒီယို ကှနျဖရငျ့ ပွုလုပျအစညျးအဝေးမှာ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက နစက တပျမတျောကို […]
မကွာခဏရနျဖွဈတိုငျး FacebookကိုBlockလိုကျ PH ကို Blockလိုကျနဲအဲလိုခဈြသူစုံတှဲတှရှေိလား….
မကွာခဏရနျဖွဈတိုငျး FacebookကိုBlockလိုကျ PH ကို Blockလိုကျနဲအဲလိုခဈြသူစုံတှဲတှရှေိလား…. မကြာခဏရန်ဖြစ်တိုင်း FacebookကိုBlockလိုက် ဖုန်းကိုBlockလိုက်နဲအဲလိုချစ်သူစုံတွဲတွေရှိလား….?။ဒါဆိုရင်သေချာတာကတော့ အဲစုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာလက်ခံပါသလား… ဖုန်းခေါ်လိုမအားရင် သေချာပြီ ဒီနေ့ရန်ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာ။ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနဲများဖုန်းပြောတာလိုပြောရင်သဝန်တိုပြီး ဖြေရှင်းမရ၊ပြသနာရှာတက်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိနေပြီလား။ ဒါဆိုသင်ဟာအရမ်းကံကောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။သင့်အပေါ်သူအရမ်းချစ်တဲ့သူမို့ပါ။စိတ်ဆိုးပြီးဖုန်းကိုBlockထားပေမယ့် တခြားဖုန်းနဲဖုန်ပြန်ဆက်ချော့မှာကို မျော်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သင့်ပေါ်စိတ်ဆိုးတိုင်း Blockတိုင်း သင်ဘက်ကတခြားနည်းနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ် ပြီးရှင်းပြပါ။ မကြာခဏ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရန်ဖြစ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖုန်းပြန်ဆက် […]
လယျသမားမိသားစု မကျြစိတဈလုံးသာပါတဲ့ နှားလေးကို မှေးမွူမိပွီးလိုကျသောအခါ… အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ West Bengal က ရွာတစ်ရွာမှာ ထူးဆန်းစွာ မျက်လုံးတစ်လုံးတည်းသာပါပြီး နှာခေါင်းမရှိတဲ့ နွားငယ်လေးကို မွေးမြူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပါတဲ့ မျက်လုံးဟာဆိုရင်လည်း ခေါင်းရဲ့မျက်နှာ တည့်တည့်မှာ ရှိနေခဲ့ကာ နှာခေါင်းမပါပါဘူး။ အဲ့ကောင်လေးကို မွေးတဲ့ နွားမကြီးကတော့ လျှာဖြင့်လျက်နေခဲ့ကာ မိခင်စိတ်ဓာတ်ကို […]
ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ဖို့ သွားရောက်ကြသူများကို အခြေအနေ အချိန်အခါ မိသိသူများ လို့ ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို
ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ဖို့ သွားရောက်ကြသူများကို အခြေအနေ အချိန်အခါ မိသိသူများ လို့ ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ပန်ဆယ်လို မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သီလ သမာဓိ ဂုဏ်သတင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနယ်အနယ်အရပ်အရပ်ကမှ ဖူးမျှော်ကြည်ညိုလိုသူများ တစ်နေ့တစ်ခြား စည်ကားလာခဲ့ပါတယ်။ အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်မှ ဖူးမျှော်လိုသူများ များပြားလွန်းတဲ့အတွက် ကားတန်းကြီးမှာ ရှည်လျှားလွန်းလှပါသည်။ အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကို တော်လှန်နေတဲ့ ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ […]